शेरबहादुरजीले मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुभएको होइन, म र माधवजीले उभिदिनुस् भनेका हौं- प्रचण्ड – Nepal Online Khabar
असार १२, २०७८ शनिबार 356
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले गरेका सहमति कार्यान्वयन नगर्दा देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
शनिबार विपक्षी गठबन्धनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टी एकता भएको अवस्थामा केपी ओलीले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको दाबी गरे। ‘केपी ओलीसँग लचक भएर सम्झौतामा अडिग नहुनु मेरो कमजोरी हो।
मेरो मन अलि उदार र कमलो छ, भर्खरै एकता भाको पार्टीमा किन झगडा निम्त्याउनु भनेर मैले छाडिदिएको हुँ,’ उनले भने।केपी ओलीले आफूलाई धोका दिएको प्रचण्डले बताए।
‘केपी ओलीले धोका दिए। पालैपालो अध्यक्ष र पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो। हस्ताक्षर पनि ओलीजीले नै गरेका हुन् तर मान्दैनन्’, उनले भने,‘ म अलि भावुक छु, लचिलो छु।’
केपी ओलीले संसद पुनर्थापना र पार्टी विभाजनको दुई महिनापछि आफूलाई फोन गरेको जानकारी प्रचण्डले गराए। ‘संसद पुनर्स्थापना र पार्टी विभाजनको दुई महिनापछि बल्ल मलाई ओलीले फोन गरेका हुन्,’ उनले भने।
शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले ओलीले अदालतलाई समेत धम्क्याउन थालेको बताएका हुन्। ‘संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ। १४९ जना सांसदहरुको बहुमतसहित दाबी पेश भएकाले देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ,’
उनले भने,‘शेरबहादुरजीले मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुभएको होइन। मैले र माधवजीले उभिदिनुस् भनेका हौ।’ उनले संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ मा सांसदलाई ह्विप नलाग्ने गरेर विशेष अधिकार संविधान बनाउँदा नै राखेको स्मरण गर्दै संसद विघटन हुन नदिनका लागि उक्त व्यवस्था राखिएको दाबी गरे।
‘अदालतले संविधानअनुसार नै निर्णय गर्छ । केपी ओलीले अदालतलाई धम्क्याउन थालेका छन्, कहिले महान्यायाधिवक्तामार्फत् कहिले आफै’, उनले भने, ‘सर्वोच्चले संविधान, ऐन कानून र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताअनुसार नै फैसला गर्छ केही दिनपछि शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ।’
‘मैले संविधान, नियम र कानुन अनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ भन्दा प्रचण्डको सेटिङ भनेछन्, मेरो सेटिङमा नेपाल चल्ने भएत? उनले प्रश्न गरे, ‘हेर्नुहोला केपीपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो सेटिङ गरेर भनेको होइन।
देउवाले प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर कहिल्यै भन्नुभएन। हामीले उभ्याएका हौँ। साथ दिन्छौँ भनेर।’ प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प बनेको भन्दै त्यसको विरोध गर्दा केपी ओलीले धम्क्याएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रचण्डले राजाको विरोध गरेर आएकाहरू राष्ट्रपतिको कमजोरीमा बोल्न किन नपाउने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।‘राष्ट्रपति ओलीको रबर स्ट्याम्प भएकै हो। त्यसको विरोध गर्न किन नपाउने? राष्ट्रपतिको बारेमा बोल्न पाइदैन भन्ने हु इज केपी ओली?,’
उनले आफूले राजा राम्रो भनेको नभई व्यंग्यात्मक शैलीमा आफ्नो भनाइ राखेको स्पष्ट पारे। ‘राष्ट्रपतिको बारेमा बोल्न पाइँदैन भनिदैछ। मैले राजाभन्दा बढी हुन खोज्नु भएन भन्न पो खोजेको हो नि। राजा ल्याउनुपर्‍यो भनेर भनेको हो त होइन नि।’
कालीबहादुरलाई जेल हालीहालौं भन्ने केपी ओली पार्टी विभाजन भएपछि कालीबहादुर खोइ भन्दै हिँडेका छन्। यो गोहीको आँशु चुहाउनुको कुनैं अर्थ नहुने उनले बताए।
उनले माधव नेपाल खाट्टी एमालेको नेता भएको तर्क गरे। ‘माधवजी एमालेको खाटी नेता देखिनुभएको छ। उहाँको उचाइ बढेको छ। बरू ओलीको हाइट घटेको छ’, उनले भने।
Prevयुरोकप: अन्तिम १६ मा कुन कुन टिम भिड्दै ?
Nextकाठमाडौंका नदी खोलामा पनि पानीको सतह बढ्यो, तटीय क्षेत्रमा जोखिम
उपसचिव प्रेम सञ्जेलले पाए अवकाश : जाँदाजाँदै भने-‘म कर्मचारी कि दलाल’
यी ३ राशिहरुले पाएका हुन्छन् सानै उमेरमा धेरै धनी बन्ने भाग्य, हेर्नू-होस् !